Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ထူးထူးခြားခြား ထူးမခြားနား
Writer Sein Lyan Time 7:42 pm
ပြန်ကျုံ့တာတော့ ကောင်းဘူး (ဥပမာ -မိုးပျံပူဖောင်း)
အဲ တချို့ကျတော့လဲ ပူလို့ပွတာရှိသလို
တချို့ကျတော့လဲ အေးအေးလေးနဲ့ ပွတတ်သကိုး (ဥပမာ- နံပြားနဲ့ ပေါင်မုန့်)
ထို့ကြောင့် တနှစ်ထက်တနှစ် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ (မှိုမတက်ဘဲ) ကြီးသထက်ကြီး ပွသထက်ပွစေသောဝ်
အင်း ကြီး လာလေ ကြိုက်လေ ပဲတဲ့၊ အဲ အသက်ကြီးလာလို့ အဟာရ ကို ပိုကြိုက်လာတာ ပြောပါတယ်..:P
အပူမကြီး သွားမကိုင်နဲ့ မကိုင်ရသေးပဲ လှမ်းဟပ်လိုက်မှ ဘယ်ပြေးရမှန်းမသိဖြစ်မယ်၊
စပ်စု တာလဲ နဲနဲ လျှော့ပေါ့...တော်ကြာ CSI က လာခေါ်နေလို့ ဒီက မောင်နှမတွေ ညက်ရည် တွေ ကျနေရဦးမယ်၊
ဘာမှမပြောနဲ့ အသက် ၃၀ ကျော်ပြီ.. လူပျိုကြီး.. ဒါပဲခေါ်မယ်.. :D
Happy Birthday ပါ ကိုဖိုးစိန် ... နောက်ကျမှ ဆုတောင်းမိတယ်... မိုးခါးဆီမျာ မနေ့ထဲက ဆုတောင်းသွားတယ်နော်.....
အသက်ကြီးပြီး အချိန်စီးလာသားပဲ ဘာမှ ပူမနေနဲ့.
ဖိုးဖိုး ချစ်သောသူများနဲ့ အမြဲထာဝရပျော်ရွှင်ရယ်မောနိုင်ပါစေ။ မွေးနေ့မှ ဒီဆုတောင်းစကားရေးဖြစ်ပေမယ့် အမြဲဆုတောင်းလျက်
နောက်တစ်ခါထိပ်စီးပြောင်းတဲ့အချိန်ကျရင် ဘ၀မှာ အလိုရှိရာဆန္ဒတွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံစွာ လျှောက်လှမ်းနေသူအဖြစ် မြင်ချင်တယ်နော်။
Wish you all the best and every success. Never give up cuz your dreams will come true.
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရူးသွားတာ သိနေပြီ ဆိုလား ဘာလား
ဒေါသကြီးတဲ့ စိတ်နဲ့ ရူးတယ်ဆိုလား ဘာလားးးး
ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများ အားလုံး ပြည့်ဝပါစေ
ကိုဖိုးစိန် ဆီမှာ ကျနော် တစ်ခါမှ ကော့မန် မရေးဖူးပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကျနော်ရေးတာ အမှားပါသွားခဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ကျနော်က စာဖတ်သူ သက်သက်ပါ။ ကိုဖိုးစိန် ဆီမှာ
အမြဲဖတ်နေတဲ့ လူလို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ကိုဖိုးစိန် အခုစင်ကာပူရောက်နေတာကိုလည်း ကျနော်သိပါတယ်။
ကျနော်လည်း အခု စင်ကာပူမှာပါပဲ။
ကျနော် ဖတ်ရသလောက် ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ ပိုစ့်တွေ တော်တော်များများဟာ
ဟိုးအရင် ဆိုက်ပရက်ပ် မှာနေတုန်းက ရေးတာလောက် မကောင်း
တော့တာကို သတိထားမိတာ ကြာပါပြီ။ စင်ကာပူကိုရောက်ပြီး
ကတည်းက ရေးလိုက်တဲ့ ပိုစ့်တွေဟာ ဟိုလူ့အတွက် ရေးလိုက်
ဒီလူအတွက်ရေးလိုက်နဲ့ ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ ပင်ကိုရသတွေ ပျောက်နေတာ
အခုဒီပို့စ်ကိုလည်း ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ မွေးနေ့ပိုစ့်လို့ ထင်နေတာ။
ဒါပင်မဲ့ ဘာကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးနေတယ် ဆိုတာ ကျနော်
မသိဘူး ဖြစ်နေလို့ အခုလိုမျိုး ရေးလိုက်ရတာပါ။
ကိုဖိုးစိန်ပြောတဲ့ အာဟာရ ဆိုတာ မိန်းမကို ပြောတာလား။
ကိုဖိုးစိန် မိန်းမကြိုက်တာ ဘလောဂ့်မှာ ရေးတင်စရာမလိုဘူးလို့
ကျနော်ထင်တာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်သိထားတာ
ကိုဖိုးစိန်က ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်လိုက်ရတာ မေးချင်စရာတွေ များလို့ မမေးတော့ပဲ
နောက်တင်မဲ့ ပိုစ့်တွေမှာ အရင်တုန်းက ကိုဖိုးစိန်
ရဲ့ လက်ရာ ကောင်းကောင်းများကို ဖတ်ချင်ပါကြောင်း ဆန္ဒ ပြုရင်း…..
ဖိုးစိန်ကလည်း အမြဲပြောတယ်နော် အဟာရ အဟာရဆိုတာ.. ဘာဖြစ်လို့များပါလိမ့်လို့စဉ်းစားမိတယ်။ တစုံတခုသော အကြောင်းအရာ အမူအရာတွေကများ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိနေလို့ ဖုန်းကွယ်ချင်တာများလား ။ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူ ဖိုးစိန်။ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင် ပြောဆို ရေသားပါ။ အားပေးလျှက်..
အာဟာရ ဆိုတာ မိန်းမတွေ ကို တမျိုးသုံးထားတာနေမှာ။ တချို့က စပျစ်သီး လို့ တင်စားပြီး သုံးတာလဲ တွေ့ဖူးတယ်။ အာဟာရ လို့ ရေးထားတော့ ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။
ကိုဖိုးစိတ် ဆီက စကားလုံး နှစ်ခုရတယ်။
စကားများရင် ချီးပေါက်တယ် ဆိုတာ။
ကိုဖိုးစိတ်ရေ လက်ရာကောင်းတွေမျှော်နေကြတယ်။ လုပ်ပါဦး။
ထိပ်စည်းပြောင်းခဲ့ပီဆိုတော့... အင်း အင်း သဘောပေါက်ပါပြီ ကိုဖိုးစိန်ရေ..။
ပွဲငှားချင်တာ ဖိုးစိန်ကို ရက်အားလားလို့ သိချင်လို့ပါ